Maxaa ka cusub kulamada ka socda Garowe - Radio Risaala: Somali News Online
Home XULKA WARARKA Maxaa ka cusub kulamada ka socda Garowe
Maxaa ka cusub kulamada ka socda Garowe
Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ay shir yeesheen guddiga wada hadalada Puntland u qaabilsanaa dhinaca dowladda faderaalka iyo madaxweynaha maamulka Puntland.
Waxaana laga wada hadlay arimaha ku saabsan Hiigsiga 2016 iyo waxa laga yeelayo Nidaamka 4.5.
Guddiga ayaa soo gudbiyey qodobada ay soo saareen, kuwaas oo jawaab u noqonaya qaadashada Puntland ee Nidaamka 4.5, waxaana qodobada badankoodu ahaayeen kuwa horeyba loo saadaaliyey, waxaana kamid ah.
In Puntland loo madax banaaneeyo heshiisyada caalamiga ah
In deeqaha magaca Soomaaliya lagu helo si toos ah u soo gaarto Puntland, iyadoona la marsiin dowladda faderaalka.
In Xaafiisyada Hay’addaha caalamiga ah ee gudaha Puntland la kordhiyo shaqadooda, In Hay’addaha hadda qaarkood shaqadooda hoos u dhigay xarumaha Muqdisho laga furay awgood dib loo soo celiyo.
In dibu eegis lagu sameeyo sharciyadda caasimadda
In dhamaanba La fuliyo go’aamadii horey loo gaaray oo ay ka mid yihiin Arrimaha dhinaca Ciidamada, Deeqaha Waxbarashada, Siyaasada iyo Caafimaadka iyo qodobo kale oo dheeraad ah.
Xildhibaano, Wasiiro iyo Saraakiil ka tirsan madaxtooyada oo goobjoog ka ahaa shirkan ayaa sheegay in ay Puntland mawqif ahaan qaadatay In doorashada Soomaaliya lagu galo Nidaamka beelaha ee 4.5.
Shirkan oo Saxaafada ay dibad joog ka ahaayeen ayaa waxa ay ka gaabsadeen dhinacyadu in ay faahfaahin intaas ka badan bixiyaan, balse Ilo ku dhow dhow baarlamanka, xukuumada iyo madaxtooyada ayaa sheegay in aan Wasiiradda loo ogolaan in ay saxaafadda la hadlaan, ilaa qodobadan laga saxiixayo marka la gaaro Isniinta todobaadkan oo si rasmi ah loogu soo bandhigi doono magaalada Garoowe.
Previous articleDiyaarado dagaal oo duqeyn ka fuliyay Jubbada Hoose
Next articleDHAGEYSO: Barnaamijka Dhalinyarada 02-04-16